Rosa Parks, nwanyị nwanyị nke nwara anwa ịghara ịkpa ókè agbụrụ - Afrikhepri Fondation
wednesday, Jenụwarị 20, 2021
Rosa Parks na bọs
Rosa Parks, nwanyị ahụ gbara mbọ ịhapụ ịkpa ókè agbụrụ
ROsa Parks bụ onye na-alụ ọgụ maka ikike dịrị onye America, onye ndị United States Congress kpọrọ nwanyị mbụ nke ikike obodo na nne nke nnwere onwe. Ubochi omumu ya (February 4) na ubochi ejidere ya (December 1) aburula ubochi Rosa Parks, nke emere na United States nke California na Ohio.
Na Disemba 1, 1955 na Montgomery, Alabama, Rosa Parks jụrụ irubere onye na-anya bọs James Blake mgbe ọ gwara ya ka ọ hapụ oche ya, na mpaghara agba, nye onye ọcha na-acha ọcha, mgbe ngalaba ọcha emezuola.
Na 1900, Montgomery kwadoro usoro iwu obodo (ọ bụ naanị ndị ọcha nwere ike ịme ntuli aka) iji kewaa agbụrụ.
Edebere ahịrị anọ ndị mbụ na bọs Montgomery maka ndị ọcha. Esgbọ ala ndị ahụ nwere ngalaba nke agba maka ndị ojii n'ozuzu na azụ bọs ahụ, ọ bụ ezie na ndị ojii jikọtara ihe karịrị 75% nke ọnụ ọgụgụ ndị na-agba ịnyịnya.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ndị isi ojii na-eme mkpesa na ọnọdụ adịghị mma. Blake kwuru na ihu bọs ahụ jupụtara na ndị njem ọcha, mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ guzo. Ọ rịọrọ ka ndị isi ojii anọ hapụ oche ha na ngalaba etiti, ka ndị ọcha nwere ike ịnọdụ ala. Atọ n'ime ha mere ma kwaga, mana Rosa Parks alaghị. Mgbe ahụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ kpọrọ ndị uwe ojii ma jidere ya.
E boro Rosa Parks ebubo na o megidere isi nke 6, Iwu nkewa nkebi nke 11 nke Usoro Montgomery City.
Rosa Parks: Akụkọ M
3 ọhụrụ site na .6,98 XNUMX
7 ejiri site na 5,59
Zụta € 6,98
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 20, 2021 4:04
Bussa, onye Barbadin bụ onye dugara nnupụisi ohu kachasị na 1816
Ọjọọ Krismas: ememe nke St. Nicholas
Anọ nke Toltec Chords: Wayzọ nke Nnwere Onwe Onwe Gị (Audio)
Nweghachi nke nwa nwoke
Jenụwarị 8, 1454, ụbọchị mgbe Vatican kpebiri “ikpochapụ” ndị Kemite